အင်တာနက်လိင်စွဲမှုကို Naltrexone (၂၀၀၈) - ကုသပေးသောသင်၏ ဦး နှောက်
Naltrexone (2008) နဲ့ကုသအင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်း
comments: Naltrexone အရက်မှီခိုနှင့် opioid မှီခို၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသောကာ opioid အဲဒီ receptor ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်စွဲလမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရှင်းလင်းချက်များနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းရှိပါတယ်။
မိုက်ကယ် Bostwick, MD နဲ့ဂျက်ဖရီအေ Bucci, MD များက
Mayo Clinic ဆေးခန်းရှေ့ဆက်မည်ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 vol ။ အဘယ်သူမျှမ 83 ။2226-230
ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စင်တာ၏အလုပ်မဖြစ်မှုသည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအားလုံးကိုပိုမိုနားလည်လာသည်။ mesolimbic မက်လုံးမက်လုံးပေးလွန်းခြင်းဆိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပါဝင်သောဆုချီးမြှင့်ရေးစင်တာတွင်လှုံ့ဆော်မှုသည်အဓိကအခန်းကဏ္hasတွင်ပါဝင်သည်။ အစာစားခြင်း၊ ငယ်ရွယ်စဉ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုထိခိုက်စေသည့်အနေဖြင့်စွဲလမ်းနေသော ၀ တ္ထုများသို့မဟုတ်အပြုအမူများဖြင့်စိန်ခေါ်သောအခါအခြေခံရှင်သန်မှုလှုပ်ရှားမှုများသည်အလွန်အရေးပါသည်။ Dopamine သည်ပုံမှန်နှင့်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုမောင်းနှင်သည့် neurotransmitter ဖြစ်သည်။ အခြား neurotransmitters များသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ထုတ်လွှတ်သော dopamine ပမာဏကို modulate အားဖြင့် dopamine သွေးခုန်နှုန်း၏ပြင်းထန်မှုကဆုံးဖြတ်သည်။ Opiates (endogenous (သို့) exogenous) သည်ထိုကဲ့သို့သောမော်ဂျူလာများကိုဥပမာပေးသည်။ အရက်သေစာကိုကုသရန်အတွက်သတ်မှတ်ထားသော naltrexone လုပ်ကွက်များသည် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန် opiates ၏စွမ်းရည်ကိုထုတ်ယူသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဆုချီးမြှင့်ရေးစင်တာတွင် naltrexone ၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်စွဲမြဲစေသည့်စွဲလမ်းမှုကိုနှိမ်နင်းရာတွင် naltrexone အတွက် ၀ တ္ထုအသစ်တစ်ခုအကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
ဂါဘမြို့သား (γ-aminobutyric အက်ဆစ်), ISC (မက်လုံးပေး salience circuitry), MAB (လှုံ့ဆော်မှုသပ္ပါယ်အပြုအမူ), MRE (motivationally သက်ဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်), NAc (နျူကလိယ accumbens), PFC (prefrontal cortex), VTA (ventral tegmental ဧရိယာ)
Uစွဲလမ်းနေဖြင့်လွှမ်းမိုးခံရ ntil, အ mesolimbic ဆုလာဘ်စင်တာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မျိုးစိတ်နှစ်မျိုးလုံးအကျိုးအမြတ်အပြုအမူတွေကိုလှုံ့ဆျော adapter ဆောင်ရွက်ပါသည်။ နက်ရှိုင်းထံမှ brainstem အတွင်းကြောင့်အာဟာရ, ထိုလုလင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ပွားကဲ့သို့သောရှင်သန်မှုလိုအပ်ချက်ရှာ primal မက်လုံးပေးကိုသြဒိနိတ်။1 စွဲဖွံ့ဖြိုးအဖြစ်အခြားလျော့နည်းအကျိုးရှိဆုလာဘ်ရှင်သန်မှုဖို့အရေးပါအပြုအမူတွေ၏တွေလည်းထိခိုက်နစ်နာရန်မက်လုံးပေး salience circuitry (ISC) ပေါ်သို့နှိပ်ဖြစ်လာသည်။ ပို. ပို. , ဆေးသမားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ thrall အတွက်လူနာကြုံတွေ့ရ။
အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာသည်စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောဆိုင်ရာအခြေခံများကိုထပ်မံရှင်းလင်းပေးသည်နှင့်အမျှမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၊ လောင်းကစားခြင်း၊ အလွန်အကျွံလိင်ဆက်ဆံခြင်းစသည်တို့သည်မလုပ်မနေရဆုပေးရသည့်နေရာသည်မအောင်မြင်သောဆုလာဘ်စင်တာများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာသိလာရသည်။2,3ထကြွလွယ်သော-compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနည်းနည်းလေ့လာခဲ့ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း,4 အဲဒါကိုစွဲလမ်းအပြုအမူများထဲမှအမျိုးအစားဆန့်ကျင်ထိရောက်သော pharmacotherapies အခြားအမျိုးအစားများကိုတိုက်ဖျက်မယ်လို့အလိုလိုသိသဘာဝကျပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီအပြုအမူတိကျတဲ့အစပျိုးခြင်းနှင့်သရုပ်ရှိပါတယ်, သေးအလုံးစုံတို့အဘို့နောက်ဆုံးဘုံလမ်းကြောင်းဟာ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင် receptors မှတဆင့် dopaminergic လှုပ်ရှားမှု neurochemical မော်ဂျူပါဝငျသညျ။3, 5
အဆိုပါ VTA အရှင်အသစ်တစ်ခုစွဲ pharmacotherapies များအတွက်ပစ်မှတ်များနှင့် naltrexone လက်ရှိမှသာအရက်ကုသမှုများအတွက်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုကအတည်ပြုထားတဲ့ opiate အဲဒီ receptor blocker ဖြစ်လာသည်မျိုးစုံစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အလားအလာအသုံးဝင်သောတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါး၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။6 ဆုလာဘ်အတွက်တုန့်ပြန်မှုကြောင့် dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုအစပျိုးနိုင်သည့် endogenous opioids စွမ်းရည်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်, naltrexone သည်ထိုဆုလာဘ်၏စွဲလမ်းစေသောစွမ်းအားကိုငြိမ်းအေးစေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်သတ်မှတ်ထားသော naltrexone ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။ ဆိုက်ဘာ - နှိုးဆွမှုကိုရှာဖွေရန်လူနာသည်နာရီများမှာကျဆင်းလာပြီးသူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုလည်ပတ်မှုသည် naltrexone အသုံးပြုမှုနှင့်အတူသိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။
Mayo Clinic ဆေးခန်း Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ဤကိစ္စတွင်၏အစီရင်ခံအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
လူနာတစ် ဦး သည်အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်တွင်စိတ်ပညာရှင် (JMB) သို့ပထမဆုံးအကြိမ်တင်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုလောင်စေခဲ့တယ်။ သူသည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်စွဲလန်းလန်းလန်းမရှုပ်ထွေးနိုင်လျှင်လက်ထပ်ခြင်းနှင့်အလုပ်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုကြောက်ခဲ့သည်။ သူသည်တစ်နေ့လျှင်နာရီများစွာအွန်လိုင်းစကားပြောခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်သည့်အချိန်နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အကာအကွယ်မဲ့၊ ပုံမှန်အားဖြင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်လူကိုယ်တိုင်ဆိုက်ဘာအဆက်အသွယ်များကိုမကြာခဏတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
လာမယ့်7နှစ်တွေလူနာကုသမှုနှင့်ထွက်အကြိမ်ကြိမ်ကျဆင်းသွားသည်။ သူကစိတ်မကျဆေး Antidepressants, အုပ်စုတစ်စုနှင့်တစ်ဦးချင်း psychotherapy, လိင်စွဲအမည်မသိနှင့်ကြေးအကြံပေးခြင်းကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦး naltrexone ရုံးတင်စစ်ဆေးသည်အထိသူ compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားမှာအောင်မြင်မှုရေရှည်တည်တံ့ခဲ့ပါဘူး။ သူ naltrexone ရပ်စဲသောအခါသူ၏ရမ္မက်ပြန်လာ၏။ သူသည်နောက်တဖန် naltrexone ယူတဲ့အခါသူတို့ကယုတ်လျော့။ ,
သူ့အသက် ၁၀ နှစ်မှစ၍ အဘိုး၏“ ညစ်ပတ်သောမဂ္ဂဇင်းများ” ၏ cache ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်လူနာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလွန်စွဲမက်ခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းတွင်သူသည်ခရက်ဒစ်ကဒ်များနှင့်စီးရီး ၉၀၀ စီးရီးကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုများမှတဆင့်တယ်လီဖုန်းဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ မိမိကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူအဖြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြင့်သူသည်ရှေးရိုးစွဲခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှုများကိုလက်ခံခဲ့သည်။ သူ၏အပြုအမူကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျကာသူ၏လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်များသည်“ မာရ်နတ်၏အပျက်သဘောဆောင်သောလွှမ်းမိုးမှုများ” မှဆင်းသက်လာသည်ဟုဆိုခဲ့သည် အထက်တန်းကျောင်းပြီးသည့်အခါသူသည်ညအိပ်ခရီးသွားခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကြော်ငြာအရောင်းအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အလုပ်ခွင်၌ရောခရီးစဉ်များတွင်ပါသူသည်သူ၏ကွန်ပျူတာကိုစီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်သာမကအွန်လိုင်းမှ“ ခရုဇ်” အတွက်ပါအသုံးချခဲ့သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်နာရီပေါင်းများစွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အဝတ်ချွတ်စက်များသို့သွားရန်တိုက်တွန်းခြင်းများပါ ၀ င်သည်။ ၂၄ နာရီအင်တာနက်ရုံးခန်းဖွင့်ချိန်တွင်သူသည်တစ်ညလုံးအွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများတွင်မကြာခဏပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည်သည်းခံစိတ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့ပြီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်မဖြစ်မနေသာအစည်းအဝေးမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ သူသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူက“ ဒါဟာငရဲတွင်းပဲ။ ငါစိတ်ကျေနပ်မှုမရခဲ့ဘူး၊
လူနာတစ် ဦး obsessive-compulsive ရောဂါမူကွဲခံစားရလိမ့်မည်ဟုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်, သူ့စိတ်ရောဂါဆရာဝန် 100 မီလီဂရမ် /d၏ပါးစပ်ထိုးမှာ sertraline သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ လူနာ၏စိတ်နေသဘောထားနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုတိုးတက်လာခြင်းနှင့်စိတ်တိုလွယ်ခြင်းများလျော့နည်းသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုကန ဦး ကျဆင်းသွားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူသည် sertraline ဆေးကိုမသောက်တော့ဘဲစိတ်ရောဂါဆရာဝန်နှင့်တစ်နှစ်ကြာဆက်ဆံရေးကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
လူနာနောက်ဆုံးတော့ကုသမှုပြန်ရောက်တဲ့အခါသူတစ်သျှူးယားယံသို့မဟုတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့်အစည်းအဝေးများအဆုံးသတ်သည်အထိ masturbating, အွန်လိုင်းတစ်ရက် 8 နာရီအထိဖြုန်းခဲ့သည်။ သူကအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုပါဝင်သည်နှင့်သူမ၏မှသျှင်ရောဂါထုတ်လွှင်ကိုကြောက်ရွံ့မရှိတော့ရင်းနှီးသောသူ၏ဇနီးနှင့်အတူရှိ၏အင်တာနက်အဆက်အသွယ်တွေနဲ့အတော်ကြာ "ချိတ်-ups" ခဲ့လေသည်။ သူကအလုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာမိမိ compulsive လိုက်စားသုံးစွဲအချိန်ကနေဆငျးရဲသားကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်အများအပြားအလုပ်အကိုင်များဆုံးရှုံးခဲ့ရလေသည်။ သူဟာလိင်သူ့ဟာသူထံမှအစွန်းရောက်အပျြောအပါးပေမယ့်သူ့ကိုယ်သူထိန်းချုပ်ရန်သူ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အညီအမျှအစွန်းရောက်နောင်တဖော်ပြခဲ့သည်။ sertraline ကုထုံးပြန်လည်ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်သောအခါသူ၏ခံစားချက်တိုးတက်, ဒါပေမဲ့သူနေဆဲ "ဟုအဆိုပါရမ္မက်ခုခံတွန်းလှန်ရန်အာဏာမဲ့" ခံစားခဲ့ရပြီးထပ်မံကုသမှုတော့ဘူး။
နောက်ထပ် ၂ နှစ်စစ်တမ်း၊ အိမ်ထောင်ရေးပြdistနာများနှင့်အလုပ်ပြုတ်ပြီးနောက်လူနာပြန်ပေါ်လာသောအခါစိတ်ရောဂါဆရာဝန်က naltrexone ကို sertraline ကုထုံးတွင်ထည့်သွင်းရန်အဆိုပြုခဲ့သည်။ (ယခု sertraline သည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက်လိုအပ်သည်ဟုထင်ရသည်။ ) တစ်ပါတ်အတွင်း2mg /dပါးစပ် naltrexone ဖြင့်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်လူနာက“ လိင်မှုကိစ္စတွင်တိုင်းတာနိုင်သည့်ခြားနားချက်ရှိသည်။ ငါအချိန်ကိုအစပျိုးခံရမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒါဟာပရဒိသုနဲ့တူခဲ့တယ်။ " သူ၏အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၌သူ၏“ အလွန်အမင်းပျော်မွေ့ခြင်း” ခံစားချက်သည်များစွာလျော့နည်းသွားပြီးသူသည်တွန်းအားကိုခံယူခြင်းထက်ခုခံနိုင်စွမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ naltrexone ဆေးသည် 50 mg /dသို့မရောက်ရှိမှီတိုင်အောင်သူ၏လှုံ့ဆော်မှုများကိုလုံး ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုသူကတင်ပြခဲ့သည်။ သူသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန်မိမိကိုယ်ကိုကြိုးစားသောအခါ ၂၅ / ဒီဂရီတွင်ယင်း၏ထိရောက်မှုလျော့နည်းသွားသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူကိုယ်တိုင်အွန်လိုင်းကိုစမ်းသပ်ဖို့၊ လိင်ဆက်ဆံဖို့အလားအလာရှိတဲ့သူနဲ့အွန်လိုင်းမှာသွားပြီးလူတစ် ဦး ဆုံတွေ့ခွင့်ကိုစဉ်းစားခြင်းမပြုမီသူ့ကားဆီကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် ၅၀ မီလီဂရမ် naltrexone သို့ပြန်သွားခြင်းသည်သူ၏လိင်ဆန္ဒကိုလျော့ပါးစေသည်။
သူ sertraline နှင့် naltrexone သုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစိတ်ဓာတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းမှသူသည်အပြည့်အဝလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့သည်မှာ -“ ကျွန်တော်ရံဖန်ရံခါချော်သော်လည်း၊ ငါဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့ချင်ဘူး။ ထပ်မံအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုအနေဖြင့်သူသည်အရက်သောက်ခြင်း၏အရသာကိုပျောက်ဆုံးသွားစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူသည် ၃ နှစ်အတွင်းအရက်မသောက်ဘဲ“ အလွန်အကျွံမသောက်ဘဲမသောက်နိုင်” ဟုလက်ခံခဲ့သည် သူကလက်မထပ်ရသေးဘူး၊ သူသည်တူညီသောနည်းပညာအခြေခံအလုပ်ကို ၂ နှစ်ကျော်ကြာထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးသူ၏အလုပ်အကိုင်အောင်မြင်မှုအတွက်ဂုဏ်ယူသည်။
ဒီဆှေးနှေးခ၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, စွဲလမ်း, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလူမှုရေး, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းခွင် function ကိုများအတွက်လေးနက်သောအပျက်သဘောအကျိုးဆက်များကြားမှဆက်လက်ရှိကြောင်းအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။7 ထိုသို့သောအပြုအမူမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, ကျော်တင်းကျပ်စား, Self-ဖြတ်တောက်မှုနှင့်အလွန်အကျွံလောင်းကစားများပါဝင်သည်။6 သူတို့ကအစကျနော်တို့ကိုကိုယ်စားပြုဖို့အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤကိစ္စတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်အတှေးအပါအဝင်အထူးသလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, ရှိနိုင်ပါသည်။8 စွဲလမ်း၏ဤအမြင်အားလုံးစွဲ diagnoses ၎င်းတို့၏အမာခံမှာအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူနှင့်အတူ "တတ်ပြီးမောင်းနှင်မမှန်" ဖြစ်ကြောင်းယူဆထားတဲ့စိတ်ရောဂါမမှန်များ၏အမူအကျင့်ဖော်မြူလာနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။3,6စွဲလမ်း၏အာရုံကြောအခြေခံ၏တိုးမြှင့်နားလည်မှုဒီအမြင် corroborates ။ Hyman5 စွဲ "သာမန်အခြေအနေများတွင်ဆုလာဘ်များနှင့်၎င်းတို့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသောတွေကိုများ၏လိုက်စားရန်နှင့်ဆက်စပ်သောရှင်သန်မှုအပြုအမူတွေကိုပုံဖော်ဖို့အစေခံကြောင်းသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အာရုံကြောယန္တရားများတစ်ဦးရောဂါဗေဒလု။ " ခေါ်ဆိုဒါဟာလှုံ့ဆော်မှုသပ္ပါယ်အပြုအမူ (MAB) ၏ဤအာရုံကြော circuitry ဖြစ်ပါသည် - စွဲ subjugates ဇီဝလိုအပ်သော-ကြောင်းရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ။
ဗီဒီယိုများအစဉ်အလာအငြိမ်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကနေအသွင်အမျိုးမျိုးနှင့်အခန်းပေါင်း chat မှာတော့အင်တာနက်ကိုအများအပြားဒါခေါ်သာမန်လူတွေ, အကငျြ့တရား-သို့မဟုတ်ပင်နှင့်အဓိပ္ပါယ်-၏ညစ်ညမ်းဖယ်၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့အလားအလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ titillation နှင့်ဆွတစ်ခုကြီးထွားလာအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန္ဒပြည့်များအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်လှုပ်ရှားမှု၏ပုံမှန်အသုံးပြုမှု compulsive ဖြစ်လာသလဲ, မိမိအအဆက်မပြတ်နှင့်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းအဖြစ်သူထောကျအလွန်အမင်းလူ့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွင်အကျိုးဆက်များနှင့်အတူဤကိစ္စတွင်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူနာစွဲ၏ဘုံဖို့ crossover အဖမ်းခံရသောလူအရေအတွက်။
တစ်ခုက MAB2အဆက်ဆက်အစိတ်အပိုင်းများရှိနေပါတယ်။9 ပထမဦးဆုံးအပြင်ပခလုတ်မှလေ့လာသင်ယူအသင်းအဖွဲ့များအားဖြင့်လှုံ့ဆော်တက်ကြွလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုဒုတိယအကြိမ် engenders: တစ်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှု-သောအရာကို Stahl10 ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု "သဘာဝမြင့်မား။ " အခြေခံပညာ MABs အစားအစာ, ရေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များနှင့်အမိုးအကာနေရာချထားဖို့အလိုလိုအားထုတ်မှုများပါဝင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထပ်နှင့်အတူပိုမိုရှုပ်ထွေး MABs ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအဖော်, လူမှုရေးအခြေအနေ, သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်အောင်မြင်မှုရှာကြံပါဝင်သည်။
တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှု (၎င်း၏ salience) မှပေးအပ်သောတန်ဖိုးမက်လုံးပေး (ထိုအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုလှုံ့ဆော်မှု engenders များ၏ပြင်းထန်မှု) ဆုံးဖြတ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ MAB စကားရပ် (အကျိုးကိုစင်တာ) ဖြန်ဖြေအဆိုပါအာရုံကြောကွန်ယက်ကိုလည်း, ISC ဟုခေါ်သည်။5, 11 မက်လုံးပေး salience circuitry အစိတ်အပိုင်းများကို (MAB ပုံဖော်အတွက် VTA, နျူကလိယ accumbens (NAc), prefrontal cortex (PFC), နှင့် amygdala ၎င်း၏အထူးသဖြင့်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူအသီးအသီးတို့ပါဝင်သည်ဂဏန်း) ။ သဘာဝအများနှင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးအပြုအမူတွေအတွက် ISC လှုပ်ရှားမှုမှဘုံအဆိုပါ NAc-ဒါခေါ် Prime-အတွက် VTA ထံမှ Impulses သတင်းပို့တုံ့ပြန်သို့ dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။3,5VTA ထံမှ NAc ဖို့ dopaminergic စီမံချက်များအားလုံး ISC အစိတ်အပိုင်းများအကြား glutamatergic projections ဖြင့်အပြန်အလှန်ကြောင်း key ကို ISC ဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ amygdala နှင့် PFC modulatory input ကိုပေး။5 အဆိုပါ amygdala တစ် noxious သို့မဟုတ်ပျြောမှေ့စ valence-တစ်ဦးထိခိုက်စေသေံ-ဖို့နှိုးဆွသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နှင့်, PFC သည့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်မှန်သောချိန်ခွင်ဆုံးဖြတ်သည်။9, 12 ဤသည်အပျော်အပါး-ဆုလာဘ် circuitry နှစ်ဦးစလုံးသတိပေးချက်တစ်ခုဝတ္ထုအဓိကစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုပုံပေါ်ပြီးမရှိတော့ဝတ္ထုသို့သော် motivationally သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနေ့တိုင်းပြန်လည်စတင်မည်သည့်အခါအသင်းအဖွဲ့များသင်ယူပြန်ပြောပြသည့်အခါသက်ရှိများ။5, 9, 12
ဦး နှောက်၏အပိုင်း၏ပုံရိပ်တွင်မက်လုံးမက်စေသည့်အဓိကအချက်မှာ (ISC) သည် ventral tegmental (ရိယာ (VTA) ပါဝင်သည်။ နျူကလိယ accumbens (NAc) သို့ထုတ်လွှတ်သည်။ အဆိုပါ NAc prefrontal cortex (PFC), amygdala (A) နှင့် hippocampus (HC) မှ modulatory input ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Box A သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို ISC တွင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ dopamine (DA) ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေသော endogenous opioids များထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ Opiates များသည် NAc ရှိ guanine nucleotide-binding protein ပရိုတိန်းနှင့်တွဲဖက်ထားသော opioid receptors မှတဆင့် DA လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ × -aminobutyric acid (GABA) ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သော opioid receptors များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် interneurons များကိုသွယ်ဝိုက်။ အလုပ်လုပ်သည်။ GABA မှနှိမ်နင်းခြင်းမရှိတော့သည့် VTA သည် NAc ကို DA ၏သွန်းလောင်းမှုကိုပေးပို့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် ပို၍ ထင်ရှားလာသည်။ Box B တွင် naltrexone သည် NAc နှင့် interneuron opioid receptors များကိုမည်သို့ပိတ်ဆို့သည်ကိုပြသည်။ DA ၏မက်လုံးသည်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကျဆင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။ (Macmillan Publishers Ltd မှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သဘောတူထားသည့် - သဘာဝအာရုံကြောသိပ္ပံ၊ မူပိုင်ခွင့် ၂.၅)
အဆိုပါ ISC အထီးကျန်မှုတွေအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမထားဘူး။ ကျယ်ပြန့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ cortex တစ်လျှောက်လုံးစတင်ပေါ်ပေါက်လာ neurochemicals နှင့် endogenous opiodergic, နီကိုတင်း, cannabinoid နှင့်အခြားဒြပ်ပေါင်းများအပါအဝင် ISC activation modulate ကြောင်း subcortical ဒေသများ, တစ် pharmacopoeia ဖော်ပြသည်။11, 13 ISC များအတွက် Opiodergic လမ်းကြောင်းတိုက်ရိုက် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်သော NAc သူ့ဟာသူအပေါ် receptors ထားရှိရေး2 နှင့်ထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်γ-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) နှင့်ကြောင်း secrete ကြောင်း interneurons အပေါ်μ-opiate receptors ၏ထုံးစံ VTA dopaminergic အာရုံခံထံမှ dopamine လွှတ်ပေးရန်တားစီး။1, 5, 7, 14 ဘယ်အချိန်မှာ endogenous opiates (နဲ့အတူ Endorphins) သို့မဟုတ် exogenous opiates (မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျ) ဤ receptors မှချည်ဖြစ်စေ, ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းစေပါသည်။ Opiates သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဖိနှိပ် function ကိုဖျော်ဖြေထံမှ interneurons တားဆီးများနှင့် dopamine အဆင့်ဆင့်ဟာ VTA တိုးပွါး။3
အားလုံးဇီဝကမ္မစွဲလမ်းတ္ထုများပျက်ယွင်းနေ ISC လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆယ်လူလာ level မှာ, ထိုကဲ့သို့သောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုသို့မဟုတ်လိင်စိတ်နိုးထအဖြစ် motivationally သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ် (MRE), dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပေါ်စေသော endogenous opiate လွှတ်ပေးရန်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ISC ဝှက်ရေရှည်အဖြစ်အပျက်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များသင်ယူထားတဲ့ MAB နှင့်နောက်ဆုံးဆယ်လူလာအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူတုံ့ပြန်။ ထိုအဖြစ်အပျက်နေ့တိုင်းပြန်လည်စတင်မည်သည့်အခါဤအ neuroplastic ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဦးထက်ပိုလျင်မြန်သောအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း, ပုံမှန်အားဖြင့်, ထပ်ခါတလဲလဲ MRE ထိတွေ့ attenuates နှင့်နောက်ဆုံးမှာ VTA dopamine လွှတ်ပေးရန်ငြိမ်းမသတ်။ Dopamine လွှတ်ပေးရန်ရှင်သန်မှုမှသက်ဆိုင်ရာ MABs ဖျော်ဖြေဖို့သက်ရှိများအတွက်မဟုတ်တော့လိုအပ်ပေသည်။
စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းများကို ISC ကွဲပြားခြားနားကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအတွက် MRes ကနေ dopamine လွှတ်ပေးရန်ငြိမ်းအေးပါဘူးအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။9 ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးဝါးရှည်ကာလအဘို့ပိုပြီး dopamine လွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆျောအားဖြင့်သဘာဝအလျောက်လှုံ့ဆော်မှု outcompete နိုင်ပါတယ်။5,9မူးယစ်ဆေး-ရှာခြင်းနှင့်ပုံမှန် function ကိုများနှင့်ရှင်သန်မှုအခြေခံအပြုအမူတွေနည်းနည်းအရေးပါမှုဖို့ ပို. ပို. အရေးပါပုံရသည်ဟုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူတစ်ဦးကဆိုးစွဲသံသရာရလဒ်များကို။3, 5, 12, 15
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်၎င်း၏ဥဩ call-နှစ်ဦးစလုံးတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို-နေကြသည်မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် deranged ခုခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းမှသင့်လျော်သောတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ပေးရန်အဆိုပါစွမ်းရည်။12 "မူးယစ်ဆေး-ရှာထိုကဲ့သို့သောအာဏာယူ," Hyman က "ဥပဒေကိုလိုက်နာတစ်ဦးချင်းစီပြစ်မှုများကျူးလွန်ရန်ယခင်က, လျစ်လျူရှုကလေးများမိဘများကလှုံ့ဆျောနိုငျပွီးနာကျင် alcohol- သို့မဟုတ်ဆေးရွက်ကြီး-related နာမကျန်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီသောက်နှင့်ဆေးလိပ်သောက်စောင့်ရှောက်ဖို့ပါ။ " ရေးသားခဲ့သည်5 ဤရွေ့ကား PFC လိုငွေပြမှုသည်ဤမူးယစ်ဆေး-related အပြုအမူတွေကိုပူးတွဲပျက်ယွင်းနေထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်တရားသဖြင့်စီရင်ဘို့အကောင့်။7
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရှည်ဖို့သတ်မှတ်ထားသောမော်ဖင်းအကိုက်-receptor ရန် naltrexone ကဲ့သို့သောပစ်မှတ်ထား pharmacotherapies salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများနှင့်တုန့်ပြန်တားစီးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသည်ညီမျှမှုဖြစ်လာမှဖြစ်ပေါ်စေသည်သောထိန်းအကွပ်မရှိသော dopamine မြည်ဟီးရိုက်ခတ်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောအားဖြင့်ဂါဘမြို့သားသေံတစ်ခုတိုးခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်နှစ်ဦးစလုံးယန္တရားများမှတဆင့် NAc dopamine အဆင့်ဆင့်အတွက်လျှော့ချရေးဆောင်ရွက်မှုတွေ Naltrexone လုပ်ကွက်မော်ဖင်းအကိုက် receptors ။2 နောက်ဆုံးတွင်တဖြည်းဖြည်း desensitization မှတဆင့်စွဲလမ်းအပြုအမူရဲ့အဓိကလျော့သင့်ပါတယ်။15, 16
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော်စွဲလမ်းသူ၏ PFC တွင်ဆယ်လူလာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သောလှုံ့ဆော်မှုများပိုမိုများပြားလာခြင်း၊ အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုမှ naltrexone ၏အတည်ပြုချက်အပြင်ထုတ်ဝေသောဖြစ်ရပ်များမှအစီရင်ခံစာများသည်လောင်းကစားခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်စေခြင်း၊ kleptomania နှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုကုသရန်အလားအလာကိုပြသခဲ့သည်။8, 14, 17, 18, 19, 20 ကျနော်တို့ကဒီအင်တာနက်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲတိုက်ဖျက်ရန်ရန်၎င်း၏အသုံးပြုမှု၏ပထမဦးဆုံးဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်ယုံကြည်ပါတယ်။ Ryback20 မုဒိမ်းမှု၊ အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်ကလေးငယ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအပါအ ၀ င်ပြစ်မှုများကိုကျူးလွန်သည့်ဆယ်ကျော်သက်များ၌လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့် hypersexual အပြုအမူများကိုလျှော့ချရာတွင် naltrexone ၏ထိရောက်မှုကိုအထူးလေ့လာခဲ့သည်။ 100 နှင့် 200 mg /dအကြားဆေးများကိုလက်ခံရရှိချိန်တွင်သင်တန်းသားများစွာကနှိုးဆွခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းများလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာတိုက်တွန်းမှုများကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။20 ကြွက်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထားများကို ကိုးကား. Ryback ကြောင်းနိဂုံးချုပ်, dopaminergic နှင့် opioid စနစ်များအကြား PFC ဆက်စပ်မှုတွေအလေးပေး "ဟုအချို့သော endogenous opioid အဆင့် arousal နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်အလွန်အရေးပါပုံပေါ်ပါတယ်။ "20
လူနာသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအွန်လိုင်းမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဆိုင်ရာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည့်ဆိုက်ဘာဆော့ဖ်ဝဲတွင်မပါ ၀ င်သောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကျိုးဆက်များမှပြproblemsနာများရှိခဲ့သည်။ ပြီးသားတစ် ဦး ရွေးချယ် serotonin ပြန်လည်သိမ်းဆည်း inhibitor ပါဝင်သည်တဲ့ဆေးဝါး regimen မှ naltrexone ထည့်သွင်းခြင်း, တစ် ဦး မိုးရွာသွန်းမှုကျဆင်းခြင်းနှင့်သူ၏စွဲလမ်းရောဂါလက္ခဏာတွေ၏နောက်ဆုံးတော့ resolution ကို, သူ့လူမှုရေး, လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး function ကို၏ရလဒ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်။ VAB dopaminergic အာရုံခံများကိုဟန့်တားသော GABAergic interneurons များတွင် naltrexone သည်မော်ဖင်းအကိုက်ကိုလက်ခံခြင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် endogenous opiate peptides သည်သူ၏အင်တာနက်ကိုလိင်မှုကိစ္စပြုလုပ်ခြင်းကိုအားဖြည့်တော့မည်မဟုတ်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ သူသည်ဤလှုပ်ရှားမှုကိုအစပိုင်း၌ဆက်လက်တမ်းတခဲ့သော်လည်းသူ၏စမ်းသပ်မှုအပြုအမူများကသက်သေပြခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်တွန်းလှန်နိုင်လောက်သောအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိတော့ပါ။ အင်တာနက်လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုကိုသတိပေးသည့်အချက်များ၏အဓိကကျမှုမှာသူ၏အပြုအမူကြောင့်သူ၏အကျင့်စရိုက်ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးအထိလျော့နည်းသွားသည်။ တိုက်ဆိုင်စွာဖြစ်သော်လည်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါကသူသည်အရက်သောက်ခြင်းကိုမပျော်တော့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုအခြားလူနာများထံယေဘူယျအားဖြင့်သိရှိနိုင်စေရန်နှင့် naltrexone သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကိုဖယ်ရှားပေးသောယန္တရားကိုရှင်းလင်းရန်အတွက်နောက်ထပ်သုတေသနများလိုအပ်သည်။
Balfour, ME, ယု, L ကိုနှင့် Coolen, LM ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်-ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအထီးကြွက်များတွင် mesolimbic system ကိုသက်ဝင်စေ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 718-730
Nestler, EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား ?. နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1445-1449
Mick, TM နှင့်ဟော်လန်, အီး Impulse-compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ CNS Spectr ။ 2006; 11: 944-955
Grant က, je, ဘရူ, ဂျာနှင့် Potenza, MN ။ ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ neurobiology ။ CNS Spectr ။ 2006; 11: 924-930
Hyman, SE ။ စွဲ: သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တစ်ဦးရောဂါ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1414-1422
Raymond, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား, Grant က, je ကင်မ်, SW, နှင့် Coleman, naltrexone နှင့် serotonin reuptake inhibitors နှင့်အတူ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အီးကုသမှုနှစ်ခုဖြစ်ရပ်တခု။ int Clin Psychopharmacol ။ 2002; 17: 201-205
Cami, ဂျေနှင့်တတ်ကြ၏, အမ်မူးယစ်ဆေးစွဲ။ N ကို Engl J ကို Med ။ 2003; 349: 975-986
Grant က, je, Levine, L ကိုကင်မ်, D, နဲ့ Potenza, MN ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအတွက် Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 2184-2188
Kalivas, PW နှင့် Volkow, ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1403-1413
Stahl, SM ။ in: Essential Psychopharmacology: အာရုံကြောသိပ္ပံအခြေခံနှင့်လက်တွေ့အသုံးချခြင်း။ 2nd ed ။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်, NY; 2000: 499-537
Berridge, KC နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, TE ။ ဆုလာဘ် parsing ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2003; 26: 507-513
စတိန်း, RZ နှင့် Volkow, ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား neuroimaging ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 159: 1642-1652
Nestler, EJ ။ ကုသမှု neurobiology မှ: စွဲဆန့်ကျင်တိုးတက်မှု။ နတ် neuroscience ။ 2002; 5: 1076-1079
၏သား, S, Rubey, R ကို, Brady, K ကို Malcolm, R ကိုနှင့်မောရစ်, Self-ပွောသညျကိုအတှေးနှင့်အပြုအမူ၏ T. Naltrexone ကုသမှု။ J ကိုအာရုံကြော Ment dis ။ 1996; 184: 192-195
Schmidt က, WJ နှင့် Beninger, RJ ။ စွဲ, schizophrenia, ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့် dyskinesia အတွက်အပြုအမူ sensitization ။ Neurotox Res ။ ၂၀၀၆; 2006: 10-161
Meyer, JS နှင့် Quenzer, LF ။ အရက်။ အတွက်: Psychopharmacology: မူးယစ်ဆေးဝါး, အဆိုပါဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ။ Sinauer Associates မှ, Inc ဆန်းဒါးလန်း, MA; 2005: 215-243
Grant က, je နှင့်ကင်မ်, SW ။ kleptomania နှင့် naltrexone နဲ့ကုသ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အမှု။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 13: 229-231
Grant က, je နှင့်ကင်မ်, SW ။ kleptomania များ၏ကုသမှု naltrexone ၏ open-တံဆိပ်လေ့လာမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 63: 349-356
Kim က, SW, Grant က, je, Adson, DE, နှင့်ရှင် YC ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုကို Double-မျက်စိကန်း naltrexone နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 49: 914-921
Ryback, RS ။ ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ကုသမှုအတွက် Naltrexone ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 65: 982-986